Librem 5, yekutanga smartphone kuve nePlasma Mobile (kana pamwe kwete) | Linux Vakapindwa muropa
Librem 5, yekutanga smartphone kuve nePlasma Mobile (kana pamwe kwete)
Sezvo Windows Runhare uye Ubuntu Runhare rwakatanga kudzikira, pane zvakawanda dzimwe nzira dziri kuedza kuve yechitatu sarudzo mukati memasisitimu anoshanda enhare. Anokwikwidza akaomarara weIOS uye Android iyo inopa akasiyana kune vashandisi uye vanogadzira.
The company Kuchena kunoratidzika kunge kuri kuita kubheja kwayo paPlasma Mobile, imwe sarudzo yakapihwa neKDE timu mwedzi yapfuura uye kuti zvishoma nezvishoma yave kuita inonakidza sarudzo kune vazhinji vashandisi, asi, sezvakaitika mukuedza kwekare, Plasma Mobile haina zvigadzirwa zvayo. Zvirinani kusvika zvino.
Purism neKDE vazivisa kuti vari kushanda paLibrem 5, smartphone ichaunza Plasma Mobile nayo. Parizvino, Librem 5 iri smartphone iri kutsvaga mari yekugadzira uye kushambadzira, izvo zvinotitaurira kuti zvinotora nguva kurova musika. Asi kana zvakadaro, tinenge takatarisana neyemahara smartphone inoshanda neLinux uye nePlasma desktop yemafoni. Kuve imwe nzira huru kune vashandisi vasingade Android kana iOS.
Sezvingabvira, kana iripo, kana ini ndichifunga kuti ingave iri yechitatu nzira huru, sezvo Plasma Mobile isiri chete yakazvimirira inoshanda sisitimu asiwo Izvo zvakare zvichaenderana neApplication zvishandiso, Firefox OS, Ubuntu Runhare, nezvimwe ... Iyo ecosystem iyo inosanganisira akasiyana siyana maapplication pasina kurasikirwa zvakavanzika uye chengetedzo iyo Gnu / Linux inopa.
Rutivi rwakaipa rweiyi purojekiti ruri mumitengo yayo Sezvo neiyo yakakurumbira Ubuntu Edge, Librem 5 inoda mari hombe kwazvo, inodarika mamirioni 1,5 emadhora. Chinhu chakakonzera Ubuntu Edge kutadza uye zvakafanana zvinogona kuitika neLibrem 5. Iyo mhomho yekutsvagisa vanhu ichiri kushanda, asi mari yakaunganidzwa haisati yasvika miriyoni yemadhora. Chero zvazvingaitika, kana kambani yakaita saPurism yatarisa kuPlasma Mobile, mafoni anokwanisa-KDE anogona kuoneka pasina nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Librem 5, yekutanga smartphone kuve nePlasma Mobile (kana pamwe kwete)
Hi Joaquín, zita racho harina kunaka, ndinofunga rinofanira kuti Plasma. Ndatenda neruzivo.
Joaquin Garcia akadaro
Hi Eduardo, ndinokutendai zvikuru nekuda kwechiziviso. Yakatoshandurwa kare. Ndine urombo chaizvo, dzimwe nguva ndinonyora uye ndinoongorora nekukurumidza zvekuti handitombozviziva. Ndatenda zvikuru uye kwaziso !!!
Pindura Joaquin García
Handizive kuti zvakanaka sei kukwidza tarisiro yakadaro parunhare zvekuti inodhura € 600.
Zvinondipa pfungwa yekuti chichava kutadza kubva paminiti 0.
Raspibheri pi ine 4-core processor uye isingasviki 1GB yegondohwe uye inomhanyisa xlde zvakakwana pane makumi mana ”tv.
Ini ndinofunga kuti yakanaka ichave yekununura nharembozha inoenderana html5 / css3 uye javascrit iyo firefox yaigadzira uye kuigadzirisa kune base system gnu / linux. Wobva waona maitiro ekurodha firmware yeiyo Android kernel uye gadzira chigamba kuti ukwanise kutsiva iyo Android roms ne linux
Clem inotaura nezve Sylvia, ramangwana Linux Mint 18.3
Mutsvagiri mukuru weLinux kernel ndi ... Microsoft